Accueil > Gazetin'ny nosy > K3F: Hanatanteraka ny fehin-kevitra ny Eveka sy ny FFKM
K3F: Hanatanteraka ny fehin-kevitra ny Eveka sy ny FFKM
Tao anatin’ny tapa-bolana mahery izay dia nisy fivoriana matetitetika nokarakarain’ny fikambanana antsoina hoe K3F (Komitin’ny Fahamarinana, Fandriam-pahalemana ary ny Fiadanana), izay fikambanana ivondronan’ny hery velona maro eto amin’ny firenena ka ahitana ny mpivavaka tsy ankanavaka finoana, ny fikambanana tsotra isan-karazany, ny fiaraha-monim-pirenena, ary ny mpanao pôlitika maro koa. Efa miisa hatrany amin’ny 150 mahery no voalazan’ny mpikarakara ity hetsika ity ny fikambanana ao anatiny ary vonona handray andraikitra amin’ny tsy fandehanan’ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao.
Hanatanteraka ny antso nataon’ny fivoriamben’ny Eveka, izay nanaovany antso avo tamin’ny vahoaka Malagasy tamin’ny 13 may 2017, izay milaza fa: “miantso ny kristianina rehetra hivondrona sy hiray hina ary handray andraikitra amin’ny zavatra mahazo ny firenena amin’izao fotoana izao”.
Ny an’ny FFKM koa dia nanao fanambarana tamin’ny faha 19 mai 2017 izay nilaza fa: “efa fanahy maloto no misy ataon’ny fitondrana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ka tsy tokony hijery izany fotsiny ny Malagasy sy ny kristianina rehetra”.
Noho izany dia tapa-kevitra ny fikambanana maro tao Fianarantsoa tamin’ny taon-dasa 2017 iny fa hanohana ny fanehoan-kevitra izay nolazain’ny Eveka avy tamin’ny fivoriambe izay nataon’izy ireo izany. Nivory matetika tao amin’ny sekoly Saint François Xavier tao Ambatomena izy ireo isaka ny asabotsy nandritra ny volana maromaro. Tamin’izany no nanapahana hevitra ka natsangana ny K3F ity. Nirohotra namonjy ity toerana ity ny fikambanana maro tao Fianarantsoa tsy ankanavaka izay nahatsiaro tena fa tsy izy intsony no ataon’ny fanjakana ankehitriny. Nisy ny fanehoan-kevitra maro tamin’izany ka toa ireny zavatra nitranga tany Grèce tamin’ny andron’ingahy Socrate izay rain’ny demôkrasia eran-tany ny zava-nisy. Ny tsy fandriam-pahalemana no tena nibahan-toerana tamin’izany izay mandravarava ny mponina any amin’ny faritany manontolo, ka nahatonga ny fahantrana amin’izao fotoana izao. Ny asan-dahalo dia efa niova fenitra ka ny fanjakana mihitsy no ampaingan’ireo olona mpivory tamin’izany fa lehiben’ny dahalo sy manapotika ny fiainany. Nohadihadian’izy ireo koa ny raharaham-pirenena ka dia samy nampiseho ny heviny avokoa ny olona rehetra tonga nivory tao amin’ity toerana ity. Isan’ny nandray anjara be tamin’ny fanentanana tamin’izany ny môpera maro tao Fianarantsoa.
Noheverina fa maty ankaranany ity fikambanana ity kay nisoko mangina tao anatin’ny volana vitsy. Nanentana ny olona tany amin’ny faritany hafa ireo lohandohany ka tafatsangana ny K3F tany Toliara, toa izany koa ny tany Manakara, Ambositra ary izao tonga eto Antananarivo izao ry zareo.
Ao amin’ny kolejy Saint Michel etsy Ampahibe izy ireto no nivory tsy tapaka tao anatin’ny tapa-bolana izao. Fantatra fa fikambanana 150 ankehitriny no efa mivondrona ao amin’ny K3F ka hanao ny zaikabe any Fianarantsoa izy ireo atsy ho atsy.
Tany Fianarantsoa ary dia efa nisy koa ny fivoriana fanomanana ity fihaonambem-pirenena hataon’ny K3F ity tamin’ny faha 6 martsa 2018 teo ka isan’ny nitarika sy nandray anjara tamin’izany ny eveka sy ny FFKM ary ny mpanao pôlitika sy ny fiarahamonim-pirenena.
Tsy maintsy ampiharina ny fanapahan-kevitra noraisina tamin’ny fivoriamben’ny Eveka iny, hoy ihany ny lohandohan’ny mpanomana ity fihaonana ity. Tsy azo ekena intsony izao zavatra iainan’ny firenena izao, ary tsy maintsy mandray andraikitra ny vahoaka Malagasy hoy ihany izy ireo raha tafaresaka taminay. Hodinihina amin’izany ny fivoriana sy raharaha fanapotehana ny firenena ankehitriny sy ny hoavin’i Madagasikara hoy ihany ireto mpitarika ireto.
Samy miandry izany fotoana izany avokoa ny olona mpanaraka ny raharaham-pirenena rehetra ankehitriny. Vaovao tsara harahina koa izy ity satria isan’ny mitana ny sain’ny vahoka Malagasy maro ankehitriny.
Tamin’ny taona 1991, sy ny taona 2001 no nisy toa izao teto Madagasikara. Notenenina ny mpitondra fanjakana nefa tsy nihaino ny feom-bahoaka tamin’izany fotoana izany. Mbola nitohy izany ny taona 2009, izay naharava ny fanjakana tamin’izany fotoana izany. Ankehitriny ary sao dia tokony hiova fihetsika ny fanjakana satria efa ny hery velona no mihetsika indray.